Fiara fiara ao Thailand ~ Journey-Assist - aiza ary amin'ny firy
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Mampiavaka ny fitsipiky ny fifamoivoizana any Thailand » Ny fanofa-fiara ao Thailand
Ny fijanonana fiara amin'ny fikambanana iraisam-pirenena tambajotra lehibe
Ny fanofa fiara amin'ny alàlan'ny broker
Ny saran'ny fiambenana fiara ao Thailand
Tahirin-kevitra amin'ny hofan-trano, fameperana.
Banky banky ho an'ny fanofana fiara
Fepetra na antoka nampanaovina rehefa nanofa fiara tany Thailand
Endri-javatra mitondra fiara any Thailand
Manofa fiara amin'ny orinasa kely
Ny orinasa manofa trano kely dia azo antsoina hoe orinasa rehetra tsy miasa afa-tsy any Thailand, sy ireo mpaninjara manokana. Matetika ireo orinasa ireo dia manofa fiara mivantana eny an-toerana. Tonga ianao, miakara amina orinasa dimy ary manofa zavatra mety aminao. Amin'ny tranga tsy fahita firy, dia afaka mitahiry amin'ny alàlan'ny Internet ianao, fa mazàna safidy io dia atolotry ny orinasa Rosiana na ny mpanelanelana.
Tsara kokoa ny maka fiara ao anaty orinasa kely isam-bolana. Amin'ity tranga ity dia hivadika ho mora kokoa, ary ho voamarina ny vidin'ny fotoana. Amin'ny orinasa kely azonao atao ny mampiady. Matetika izy ireo dia tsy mangataka ny tsara na maka vola amin'ny vola kely sy vola. Na izany aza, misy ambiguos amin'ny resaka fiantohana, mamorona fifanarahana, indraindray tsy misy takelaka fanaraha-maso, izay mitarika fisolokiana vokatr'izany. Indraindray dia ilaina ny mifampiresaka amin'ny olona tsy miankina irery. Mazava ho azy, raha ny orinasa efa ela no teo an-tsena, dia tsy afaka miahiahy ianao. Fa amin'ny ankapobeny, ny orinasa kely dia tsy voatery hatoky foana ary misy ny manahirana amin'izy ireo, manomboka amin'ny fikarohana sy miafara miaraka amin'ny filaminana.
Orinasa lehibe misy tambajotra
Ny orinasa toy izany, ankoatr'i Thailand, dia miasa any amin'ny firenena hafa eran'izao tontolo izao, izay misy ny sampany. Ny anaran'ireto orinasa ireto dia fantatra amin'ireo mpizahatany maro vokatry ny fitsangatsanganana nankany Eoropa sy firenena hafa. Ireto avy ny Sixt, Hertz, Avis sy ny hafa. Nataony rehetra ny zavatra takiana mitovy (manana pasipaoro sy zon'ny tsirairay), manana fiantohana avokoa (izay mety misy franchise na tsy manana izany - amin'ny safidin'ny mpanjifa), ny fetrany dia aseho mazava ao amin'ny tranokalan'ny orinasa. Etsy ankilany, miantoka ny filaminana. Ny fomba fahazoana haba amin'ny orinasa rehetra toy izany dia mitovy. Rehefa manofa vidiny isan'andro dia mitovy amin'ny vidin'ny orinasa madinika. Noho izany antony izany dia asaina manofa fiara mandritra ny andro amin'ny orinasan-tambajotra lehibe (azonao atao any amin'ny seranam-piara-manidina). Ny fiara iray dia azo apetraka amin'ny tranokala (avy eo tsy mila mitady azy ianao), avy eo ny karama no aloa amin'ny alàlan'ny fandoavana. Ny tahiry dia esorina amin'ny karatra (koa).
Raha ny marina dia tsy mikasika ny safidy fanofa trano fahatelo izany, fa momba ny fanatsarana ny fisavana fiara sy ny famandrihana azy ao amin'ny orinasan-tambajotra lehibe iray. Ity dia santatry ny milina fikarohana an'ny fiaramanidina fantatra amin'ny mpizahatany, izay antsoina koa hoe brokers indraindray. Ny serivisy iray azo itokisana toy izany dia ny Economybookings.
Ny tombotsoan'ny mpivarotra:
Ny fanofana azy ireo matetika dia mandoa antsasaky ny antsakany sy andavany amin'ny fanodinana fiara amin'ny mpivarotra. Noho ny fihenam-bidy lehibe toy izany, maro ireo mampiasa ny serivisy ho an'ny brokers izay afaka mamorona fako toy izany noho ny habetsahany.
Serivisy maimaim-poana "mpamily fanampiny" (roa ao ambadiky ny kodiarana). Ny ampahany hafa amin'ny mpivarotra dia afaka manolotra fiantohana lozam-pifamoivoizana amin'ny alàlan'ny fihenan'ny zero. Araka izany, manonitra ny zavatra rehetra nalain'ny mpaninjara mivantana izy ireo.
Tsy ilaina ny manao tranokala am-polony amin'ny orinasa samihafa mba hampitaha ny vidiny ary hamaritana ny fisian'ny fiara mety. Tena ilaina indrindra izany rehefa vitsy ny fiara tavela. Rehefa nandinika tranonkala iray ianao dia afaka mahita ny safidy rehetra atolotry ny mpaninjara mety.
Vidiny fanofa salan'isa
Ny vidin'ny salanisan'ny sedan mahazatra any Thailand dia eo amin'ny 1 baht isan'andro, na manao ahoana na manao ahoana ny haben'ny orinasa. Ny vidiny dia voafaritry ny vanim-potoana, modely amin'ny fiara, ny fotoana manofa. Ny mora vidy dia fiara kely sy pickup izay misy fandefasana manual. Raha ny momba ilay teny, matetika manomboka amin'ny fihenam-bidy manomboka amin'ny andro fahadimy.
Ny vidin'ny fanofa-trano isam-bolana dia 20 baht isam-bolana. Matetika dia ho an'ny tompona tsy miankina sy orinasa eto an-toerana ihany io vidiny io. Ireo orinasam-tambajotra ankoatra an'i Avis dia tsy manana fihenam-bidy lehibe isam-bolana.
Ireo mpivarotra tsy miankina dia indraindray manome safidy tranainy taloha amin'ny vidiny 500 baht isan'andro, izany dia 15 baht isam-bolana. Ireo safidy tetibola ireo dia tsy maintsy tadiavina lava. Na izany aza, tsotra ny zava-drehetra eto: na mandoa vola, na mandoa vola amin'ny fotoananao. Na dia eo aza ny fahaizana mandresy lahatra sy mihady, dia misy ny vintana hahomby amin'ny fahazoana mandeha ary mahavita mampihena ny vidin'ny fiara amin'ny fotoana tsara. Zava-dehibe koa ny mahatadidy ny vanim-potoana. Voalohany indrindra aloha, alohan'ny taom-baovao dia sarotra ny fiara manofa amin'ny orinasa sy ny tanàna rehetra, na dia amin'ny vidiny be aza.
Tahirin-kevitra amin'ny fanakarama, fameperana
Raha manofa fiara ao Thailand ianao dia mila 2 antitra fotsiny: pasipaoro sy fahazoan-dàlana mitondra fiara. Ny mpaninjara samihafa dia samy mamaritra ny fitakian'izy ireo ny zony. Amin'ny orinasa kely dia matetika tsy angatahina ny lalàna, na dia any amin'ny orinasa lehibe aza dia mazàna ny lalàna iraisam-pirenena (MVU) izay takiana. Na izany aza, ohatra, any Hertz dia afaka manofa fiara ianao miaraka amin'ny zo mahazatra.
Ny mpaninjara sasany dia mametraka fetra amin'ny taonan'ny mpamily - farafaharatsiny 21 na 25 taona (miankina amin'ny orinasa manokana). Ny famerana mety iray hafa dia mahakasika ny fampiasana ny milina - tsy mahazo mandeha mivahiny any ivelany, izany hoe, amin'ireo firenena mifanakaiky amin'i Thailand. Any amin'ireo nosy dia matetika ny orinasa kely no mitaky fitetezam-paritany mitety irery eto amin'ity nosy ity, fa tsy mifindra amin'ny tora-pasika sy làlana an-tendrombohitra. Na izany aza, tsy misy famerana amin'ny mileage.
Raha toa ka mametraka fiara ao amin'ny Internet amin'ny fotoana handraisana ny fiara ianao, dia tokony hanana ilay karatra izay nanaovanao ny famandrihana. Ity karatra ity koa dia ampiasaina amin'ny fanoratana ny fanofaana sy ny trosa.
Mandray fangatahana vola rehefa manofa fiarakodia matetika. Ny mpivarotra fiara tsy miankina dia maka vola foana, fa ny mpaninjara tambajotra dia manaisotra azy (amin'ny alàlan'ny fandotoana) irery amin'ny sarintany. Ny sandan'ny vola nateraky ny mpivarotra tsy miankina dia 5 000 ka hatramin'ny 30 baht, avy amin'ny orinasam-tambajotra - 000 ka hatramin'ny 8 baht. Miaraka amin'ny mpivarotra tsy miankina, tsotra ny zava-drehetra - aorian'ny fiverenanao ny fiara dia haverinao vola ianao. Na izany aza, miaraka amin'ny orinasa lehibe dia samy hafa ny zava-drehetra. Ny orinasa toy izany dia hanafaka ny vola ao amin'ny karatry ny banky ary hamerina an'io tahiry io ihany aorian'ny 000-10 aorian'ny faran'ny trano. Tsy mila hetsika manokana ho an'ity ianao. Ohatra, i Hertz dia hanafaka amin'ny 000 baht ao amin'ny kaonty, Avis - 20 baht. Na izany aza, tsy azo antsoina hoe olana goavana izy ireo, tsy ampy ny vola ary tsy nanjavona.
Misy mpaninjara mangataka anao handao ny pasipaoronao ho tahiry fiarovana. Tsy mendrika hanaovana izany, satria manohitra ny lalàna ary feno hosoka. Izany dia tsy ataon'ireo tompona tsy miankina irery. Orinasa iraisam-pirenena dia tsy mitaky anao ny hamela pasipaoro azy ireo. Na izany aza, ho an'ny orinasa kely sy tompona tsy miankina maro, ny sary misy pasipaoro ihany no ampy, sahala amin'ny azonao itokisana.
Ny fahasahiranana lehibe mitondra fiara any Thailand ho an'ny mpizahatany dia fiara mitondra havia sy fiara ankavanana. Ny sasany dia zatra amin'ny ora roa, fa ny hafa kosa sarotra kokoa, ny zatra azy ireo. Azonao atao ny manoro hevitra haka fiara miaraka amin'ny fandefasana fiara mandeha ho azy, amin'ity tranga ity dia tsy mila mieritreritra momba ny fanodinana fitaovam-pandehanana ianao, izay manamora ny fitaterana fiara.
SDA saika nifandrifatra taminay, ny lokon'ny jiro fifamoivoizana dia mitovy. Na izany aza, ny jiro fifamoivoizana matetika dia manana zana-tsipìka izay tsy mitovy amin'ny antsika. Tokony hokarakaraina izy ireo. Ankoatr'izay, ny ankavia amin'ny ankavia rehefa mena dia mena ny toe-javatra mahazatra.
Mon W cf. Th Fri Asabotsy Masoandro